मंसिर २४, २०७६ ०७:४५:१९
अचम्मका जनावर जसको आँखामा हुन्छ रातमा देख्ने चस्मा मंसिर २४, २०७६
'बक्सर' को रुपमा ट्रम्पको नयाँ अवतार ! मंसिर १२, २०७६
कुकुरले बचायो आफ्नो मालिकको ज्यान । मंसिर ३, २०७६
सरकारी जागिरका लागि दिनरात पढेको पढ्यै भएपछि पत्नीले घर छाडेर माइत हिँडीन् औपचारिक शिक्षामा विद्यावारीधि (पीएचडी) गरिसकेका पतिले सरकारी जागिरका लागि दिनरात पढेको पढ्यै भएपछि भारतको मध्य प्रदेशमा पतिपत्नीबीच सम्बन्धविच्छेदको अवस्था आएको छ । मंसिर २, २०७६
यी बच्चाको यस्तो फोटोले गर्दा विश्व नै डराउदै एक जोडीले आफ्नो बच्चाको क्रियकलापलाई हेर्न तथा त्यसबारे अध्ययन गर्नका लागि एउटा सिसिटिभी ल्याउँछन् । त्यसमा एउटा मनिटर जोड्छन् । त्यो मनिटरमा आफ्नो बच्चाको फोटोहरु लिन्छन् । तर, त्यसबाट एउटा यस्तो फोटो आउँछ कि विश्व नै त्यसका कारण डराइरहेको छ । मंसिर २, २०७६
अचम्म ! एक बाँदरले गर्यो मोबाइलबाट अनलाइन शपिङ चीनमा एक बाँदरले एक महिलाको मोबाइल फोनबाट अन्लाइन शपिङ गरेको घटना भिडियोमा कैद भएको छ । ती महिलाले मोबाइल आफ्नो अफिसमा छोडेकी थिइन् । कार्तिक २८, २०७६
अण्डा खाँदा–खाँदै एक व्यक्तिको मृत्यु भारतको उत्तरप्रदेशको जौनपुरमा अण्डा खाने बाजी जित्ने चक्करमा ४२ वर्षका एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । कार्तिक २१, २०७६
विमानको शीशा चर्किएपछि टाँसियो टेप, उठ्यो विवाद भारतको स्पाइसजेट विमान चढेर मुम्बईबाट दिल्ली गएका यात्री हरिहरन शंकरनले विन्डो सीट पाएका थिए । कार्तिक २०, २०७६
घरमा एक्लै हुँदा केटीहरुको यस्तो हर्कत हामी घरमा अथवा कोठामा एक्लै भयौं भने के गर्छौं रु टिभी हेर्छौं, पार्टी गर्छौं अथवा मोजमस्तीका अन्य केही विकल्पहरु । तर केटीहरु घरमा एक्लै हुँदा के गर्छन् होला ? कार्तिक १९, २०७६
यी हुन् भालु मारेर त्यसको लिंग खाने व्यक्ति भारतीय प्रहरीले बाघ तथा भालुको चोरी शिकार गर्ने एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ । बाघको चोरी–शिकारमा संलग्न रहेका ती व्यक्तिले भालु मारेर त्यसको लिंग खाने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। कार्तिक १८, २०७६
५० वर्षे आमाका लागि बेहुला खोज्दै यी युवती हाम्रो समाजमा जब छोरीहरु २०/२२ वर्ष पुग्दछन् तर बाबुआमाले उनीहरुका लागि योग्य वर खोज्न सुरु गर्दछन् । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि अवस्था त्यहीँ नै छ, आम रुपमा । तर अहिले सोसल मिडियामा भारतकी एकजना युवतीले तहल्का मच्चाइरहेकी छिन् । आफ्नी ५० वर्षे आमाका लागि ट्वीटर मार्फत योग्य बेहुलाको खोजी गर्दै उनले तस्वीर अपलोड गरेपछि त्यो भाइरल बनिरहेको छ । कार्तिक १८, २०७६
यो हो विश्वकै महँगो कार विश्वको सबै भन्दा महँगो कार बुगाटी भन्ने कार कम्पनिले निर्माण गरेको छ । यस बर्षको जेनेवा अटो शोमा यसलाई सबै भन्दा महँगो कार घोषणा गरिएको हो । बुगाटी कम्पनिले बनाएको नयाँ मोडलको गाडीको नाम बुगाटी ला वुएरेट नोयरू राखेका छन् । सो कारलाई बुगाटीले बनाएको पुरानो मोडल चिरोनको रुपान्तरित मोडल भनिएको छ । कार्तिक ८, २०७६
यो हो विश्वकै महँगो व्हिस्की स्कट्च व्हिस्कीले विश्वको सबै भन्दा महँगो व्हिस्कीको किर्तिमान कायम गरेको छ । यो व्हिस्कीको मूल्य करिब १० लाख ७० हजार डलर रहेको छ । यो विश्वकै सबै भन्दा महँगो व्हिस्की बनेको छ । १९२६ मा आसुत र १९८६ मा बोतल बनाईएको म्याकालन भलेरियो अडामीको ६० बर्षे पुरानो बोतललाई “व्हिस्कीको होली ग्रेइल” भनेर वर्णन गरिएको छ । कार्तिक ६, २०७६
जहाँ युवतीले बच्चा जनमाएपछि मात्र पुरुषले विहे गर्छन संसारभर आ–आफ्नै परम्परा तथा संस्कार छन् । जन्मदेखि मुत्यु पर्यन्त विभिन्न परम्परामा रहेको पाइन्छ । कार्तिक ६, २०७६
नितम्बको फोटो पोस्ट गरेर वार्षिक कमाइ १७ करोड ! रोमानियाकी एन्ड्रिया एबेली इन्स्टाग्राम स्टार हुन्। राजधानी बुखारेस्टनिवासी ३५ वर्षीया यी प्रभावशाली इन्स्टाग्राम मोडलले फोटो पोस्ट गरेर वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ कमाउने गरेकी छिन्। कार्तिक ३, २०७६
विहेको पहिलो रातमा दुलही सम्बन्ध राख्न नमानेपछि.... भनिन्छ विहे दुई परिवारका साथसाथै दुई मानिसको यस्तो मिलन हो जो विश्वासमा अडेको हुन्छ । तर, कर्नाटक हाईकोर्टमा एक घरमा श्रीमान र श्रीमती एकअर्काविरुद्ध सेक्स नगरेको आरोप लगाउँदै सम्बन्ध विच्छेदका लागि निवेदन दिएका छन् । कार्तिक ३, २०७६